« Raharaha Vangaindrano » : mangina ny mpitondra… | NewsMada
« Raharaha Vangaindrano » : mangina ny mpitondra…
Manaiky matoa tsy miteny ? Mangina tsy mba ahitan-teny ny mpitondra faratampony sy ny manaraka rehetra, manoloana izany. Manana andraikitra sy adidy hanazava, ankoatra ny fandraisana fepetra ny mpitondra fa tsy midongizina fotsiny tahaka izao. Ny fotoana tahaka izao : olan’ny rano sy ny haintany, ny tondra-drano any atsimo, ny fifamonoan’ny samy malagasy… no tokony hitenen’ny mpitondra ambony eto amin’ny firenena. Tokony handray ny fepetra amin’ny tany misy hotakotaka ? Na fepetra manokana hamehana satria tena miaina toe-draharaha tsy mbola nisy tahaka izao ny firenena ? Naroso avokoa izao karazan’olona rehetra izao niteny sy nanazava ny olan’ny ranon’ny Jirama… Tsy nahasakana ny fitaintainan’ny mponina teto an-dRenivohitra sy ny manodidika izany. Maivana na tsy misy na tsy mahay mihitsy ireo miandraikitra ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny fitondrana ka tsy mahagaga raha mahazo vahana ny tsaho sy ny lainga na koa ny vaovao tsy marina. Matetika koa ny fitondrana mihitsy no manafina ny marina ?
Tsy afa-bela ny mpitondra
Tsy mahagaga raha mipoitra avokoa ny lonilony sy ny fankahalana ka tonga hatrany amin’ny fandorana ny tranon’ny olon’ny HVM na mety tsy misy hidirany aza ny « Raharaha any Vangaindrano ». Efa zatra ny andraso andraso lava sy niandry ny fihanaky ny tsy fetezana rehetra koa ny mpitondra, ka tonga amin’ny tranga tahaka izao avokoa ny fiainam-pirenena. Tsy manana vahaolana mazava fa miaina amin’ny petatoko na manilika amin’ny hafa ny tsy fahombiazana.
Tena an-dalan’ny fahavarana ny firenena. Potika tanteraka ny maha izy antsika… Tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny mpitondra, maneho endrika ratsy ho fakan-tahaky ny vahoaka… Lasa miaina amin’ny « Tsy miraharaha »…
Iandrasana inona sy ahoana izao zava-misy eto amin’ny firenena izao vao ho taitra sy handray andraikitra ny mpitondra ? Tsy vitan’ny resabe na fitanisana ny fanjakana tan-dalàna izany fa ilaina ampiharina sy iainana, manomboka any ambony…